Ungalubhiyozela njani uSuku lweZiko loLondolozo lweMbali njengosapho | Oomama Namhlanje
UAna L. | | Phuhliso, Ukuzonwabisa, Intsapho
Namhlanje, uSuku lwaMyuziyam lweHlabathi lusuku olukhethekileyo. Kwisandle esinye, sele benokutyelelwa buqu kwaye ezi ziindaba ezilungileyo kakhulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqhubeke uyenze ngawo onke amanyathelo okuthintela kwaye uninzi kufuneka ubhukishe idinga. Iimyuziyam ezininzi zaseSpain zilungiselele yonke inkqubo ukuba ziyityelele nosapho, oluqhubeka iveki neveki.
Ngakolunye uhlangothi, kunye nemigca efanayo, i-motto ekhethiweyo kule nguqulo yile: Ikamva lolondolozo lwembali: phinda uphinde ucinge. Le ndlela yenzelwe ukomeleza ukwenziwa kwezinto ezintsha zemyuziyam, ngokubhekisele kwidijithali kunye nokudala iindlela ezintsha zamava kunye nokwahluka kwenkcubeko. Ngale mibono mibini iphambili sikunika umbono wokuba ungalubhiyozela njani olu Suku lweMyuziyam lwaManye amazwe.
1 Ndwendwela urhulumente ngomhla we-International Museum
2 Ukutyelela amagcisa kwiimyuziyam zawo
3 Usuku lweMyuziyam lweHlabathi
Ndwendwela urhulumente ngomhla we-International Museum
Ngale mini wonke umntu undwendwela iimyuziyam zikarhulumente ziya kukhululeka. Uninzi lwazo luququzelele iintlanganiso ezibonakalayo, imisebenzi enokukhutshelwa ukuyenza ekhaya, ukhenketho olukhokelwayo. Lumka, iMyuziyam yeNdleko ivaliwe ukuze kuphuculwe imisebenzi! Kodwa ungazijonga izinto abazilungisileyo kwisixeko sakho.
El IMyuziyam yaseMelika Ucebisa kusapho lonke, kubantwana abaphakathi kweminyaka emi-6 neli-12 ubudala Umasifundisane Ukuphinda ucinge ngemyuziyam, uphinde ucinge umhlaba. Iya kuba ngoMgqibelo olandelayo, nge-22 kaMeyi. Kuya kubakho ukuhlolwa kathathu, ngo-10: 00 kusasa, ngo-11: 30 kusasa nango-13: 00 emva kwemini. Nangona ixesha lokubhalisa laphela ngoMeyi 5, kusekho iindawo ezishiyekileyo.
El IMyuziyam yaseSorolla ineenkqubo ezizodwa, apho fumanisa iintlobo ezintsha ze rose. Eli rosa liphefumlelwe ngulowo ubonwe kwimizobo kaClotilde enxibe isuti emnyama. Imyuziyam yaseSorolla, ekummandla waseChamberí, iyathandeka kakhulu kwiintsapho ngenxa yegadi yayo, izele luhlaza, yimithombo, yimithi yeorenji kwaye ngoku luhlobo olutsha lweeroses.
Ukutyelela amagcisa kwiimyuziyam zawo
Ukuba into oyifunayo kukudibana nomculi othile kwaye usebenzise eli thuba, ukubona ezinye iindawo, siza kukunika izimvo, zinokwenziwa ngeempelaveki. Ezinye zazo zezokuzonwabisa zoSuku lweZiko loLondolozo lweMbali lwaMazwe ngaMazwe, kodwa ezinye zigcinwa kulo lonke ixesha lonyaka.
KwiFuentetodo, iZaragoza, yiyo UFrancisco de Goya House-iMyuziyam. Ungandwendwela indlu yakhe yokuzalwa, iMyuziyam yase-Engraving, kunye negumbi laseZuloaga. Kubantwana, indawo yeFuendeverde inomdla kakhulu, indawo yendalo yeFuendetodos yokwazisa ngendalo kunye nemfundo. Jonga imisebenzi yabo kwimpelaveki ezayo.
IMalaga idityaniswe UPablo Picasso, kwaye imyuziyam yakhe esixekweni icinge ngalo lonke usapho xa beququzelela utyelelo. Isindululo kukuba ngelixa abantu abadala bebona amagumbi, Abancinci, ukusuka kwi-4 ukuya kwi-10 yeminyaka ubudala, banokwenza iworkshop ukwenza eyakho imisebenzi. Ekupheleni kosapho lonke luyadibana ukujonga ubuchule babantwana.
Usuku lweMyuziyam lweHlabathi
Ukuba kunyaka ophelileyo sinyanzelwe ukuba senze konke utyelelo lwemyuziyam, kulo nyaka lukhetho. Kodwa yindlela etofotofo, apho iimyuziyam ziphinde zazihlaziya. Umzekelo, yena Imyuziyam yase-El Greco uzokudibanisa ukupeyinta noncwadi, enze imibongo efunda kunye neLope de Vega House-Museum.
El Iziko loLondolozo lweMbali likaZwelonke laseAltamira kunye neZiko loPhando izokwazisa ijelo layo leTikTok ngeevidiyo ngozinzo. Kuyo yonke loo mini, Kuyo yonke imini, ngokusebenzisa uthungelwano lwasentlalweni, wena kunye nosapho lwakho ninokuthumela imibuzo kwiMyuziyam yaseCerralbo, indawo yokuhlala yeengcungcu ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX, nesikwacebisa ukuba siyityelele njengentsapho.
Kwakhona i IMyuziyam kaZwelonke ye-Archaeology engaphantsi kwamanzi i-ARQUA, kwisixeko saseCagagena, sinikezela olu suku kwiintsapho. Ungabalandela ababalisi bamabali beemeyile, iziporho, izilo kunye namanye amabali kwisiteshi sakhe seYouTube. Kwaye ngaphambi kokuba silibale, sikuxelele ukuba Ubusuku baseYurophu beMyuziyam buhambile bangoMgqibelo, kaJulayi 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » Ukuzonwabisa » Ungalubhiyozela njani usuku lweMyuziyam yaMazwe ngaMazwe nosapho lwakho
Iingcebiso ezi-3 zokwenza abantwana bakho babe nomdla kwiimyuziyam